Obi dị anyị ezigbo ụtọ ibido usoro ọhụụ nke Viral Off Collection. N'oge a karịsịa chebe onwe anyị na nchekwa dị mkpa karịa. Gbanyụọ mkpokọta mkpokọta jiri Polygiene ViralOff® teknụzụ nke ga-enye nchebe mara mma ma nwee ntụsara ahụ. Viral Off ihe nkpuchi na sweatshirt ar ...
Oge Ngosi Ihe Ngosi N’ntanetị Na-abịa-Uwe Sourcing Paris / Sourcing At Magic Online
site ha na 20-09-01
Corona virus na-agbanwe ọtụtụ ihe ngosi na ọrụ ịntanetị. Ihe anyị na-eme ugbu a na Septemba 2020 bụ 2 na-esonụ: Uwe Ntugharị Paris (Septemba 1,2020-February 28, 2020) na SOURCING na MAGIC Online (Septemba 15-Disemba 15, 2020) Uwe na-atụgharị Paris na Shawls & Sca. ..
TEXWORLD AKWPARKWỌ OMLỌ SOLỌ N'INLỌ NCHE NA USA - July 2020
Uwe ejiji New York City (nke a na-akpọbu US Sourcing USA), emere ka mmemme mmemme ụwa wee mee n'oge July 21-23, 2020 afọ a. Ihe omume ịntanetị na-eje ozi dị ka ikpo okwu ọzọ maka ndị nrụpụta ụwa iji jikọọ na netwọk na onye na-azụ ahịa US ...
Nchịkọta Ọhụrụ ZNS maka oge SS21 na-abịa!
site ha na 20-06-16
Ajuju ọ bụla, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Anyị na-amaliteghachi ịrụ ọrụ mgbe COVID-19, jupụtara na mkpa!
site ha na 20-02-18
Anyị na-amaliteghachi ịrụ ọrụ mgbe COVID-19, jupụtara na ike! Anyị ga-anọgide na-enye ndị ahịa ngwaahịa kachasị mma na ọrụ kacha mma! Nwere olileanya na ụwa niile ga-adị mma n'oge adịghị anya.
Uwe na-acha odo odo Paris Mgbụsị akwụkwọ 2019
site ha na 19-09-06